All Anyị Mkpa bụ na Chineke — njem Lee - Official Site
nnọọ bụghị. Adịghị anyị mkpa iji nagide usoro, chi ụgha, na onwe-obi ụzọ. Anyị na-enweghị na-atụgharị e. N'ihi na ọbụna n'etiti nsogbu anyị nwere ike ịchọta ihe nile dị anyị mkpa Chineke.
Ugbu a, m maara na anyị na-anụ Kraịst na-ekwu mgbe niile, na Chineke bu ezu, na Chineke bụ ihe niile anyị chọrọ, ma ọ bụghị mgbe niile na-eche n'ezie. Gịnị Ka Ọ Pụtara n'Ezie? Anyị ebi ndụ a dara n'ụwa, na nnukwu nsogbu. Ya mere, olee otú Chineke izute ihe niile anyị na-egbo mkpa? Gịnị ka ọ dị ka, ihe fọrọ nke, ọbụna mgbe ihe nile na-ala n'iyi nọ anyị gburugburu?
Nke a na ụdị nsogbu na ahụhụ abụghị mba ọzọ ka Chineke ma ọ bụ n'Okwu Ya. Anyị hụrụ na ọ na Psalm si urua, anyị ga-ahụ ya ọzọ n'izu a na-esote Psalm, isi 142. Devid dere, sị a Psalm dị ka nke ọma. Na ihe anyị ga-ahụ na ekpere a Devid bụ a jupụtara ná nsogbu, -enweghị enyemaka, sikwara ike njite nwoke na-eti mkpu maka enyemaka.
Tupu anyị na-agụ ihe odide ezie na, Achọrọ m inye ụfọdụ ndabere. Anyị na-ahụ akụkọ nke ndụ Devid ha n'akwụkwọ + 1 Samuel.
David bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọma mara ndị na akụkọ nke ụwa. Ọ bụ eleghị anya kasị ama maka ya scrappy meriri Golayat. Ọ ihu ọma nnọọ tụbara ụfọdụ nkume na ya na slayed ya. Mgbe Devid mere, Sọl bu eze. Ma onye Izrel nke mmadụ nọ na-aghọ nnọọ ụtọ nke David. Ha na-ẹkwọ songs banyere otú ịtụnanya ọ nọ, atụnyere ya ka Saul. Ọ nọ na-ewu ewu karịa eze, na eze ọ dịghị amasị. Ya mere, ọ bụ ezie na o nwere Eze Sọl ngọzi tupu o gburu Golayat na, Saul a-ele anya David dị ka onye iro ya. O wee malite ime ihe niile o nwere ike ime ka ha gbuo ya. Ya mere, mgbe Devid na-ede nke a Psalm, ọ bụ na-agba ọsọ. Ọ bụ a agha dike bụ ndị e mere ka ọ ghọọ onye gbara ọsọ ndụ. Eze mere ka ọnwụ nke David ọnụ ọgụgụ otu onye ya na-ebute ụzọ. Ọ bụ David megide eze na ndị niile ya agha.
Ya mere, abụ na Psalm 142 anyị na-ahụ David, ezo si n'ime ọgba. Ọ na-atụ egwu maka ndụ ya, na na ọ bụ na na-ata ahụhụ na o tikuo Chineke.
M mkpu ike ka Jehova; M welie olu m nye Jehova maka ebere. M awụkwasị mkpesa n'ihu ya; n'ihu ya, asim m nsogbu. Mgbe mmụọ m na-etolite nāda # mbà n'ime m, ọ bụ gị mara ụzọ m. Ihe n'okporo ụzọ ebe m na-eje ije ikom zoro na ọnyà m. Lee ka nri m na-ahụ;ọ dịghị onye na-echegbu m. M na ọ dịghị ebe mgbaba;ọ dịghị onye na-eche banyere ndụ m. M na-etiku gị, O nwe-ayi; m na-ekwu, "Ị bụ ebe mgbaba m,òkè m n'ala ndị dị ndụ. "Gee ntị ntiku m,n'ihi na anọ m olileanya dịkwa mkpa; -anapụta m n'aka ndị na-agbaso m,n'ihi na ha akaria m. Mee ka m nwere onwe m mkpọrọ, ka m wee na-eto aha gị. Mgbe ahụ ka onye ezi omume ga-akpọkọta banyere m n'ihi ịdị mma gị m. (Psalm 142, NIV)
Anyị na-aga na-eje ije site na nke a ederede. Na anyị na-aga na-eche banyere anọ kpọmkwem ihe anyị na-amụta banyere Chineke na ekpere a site David. Na dị ka anyị na-eje ije site na ya, anyị ga-ahụ na ọbụna n'oge ihe jọgburu onwe ya nsogbu, anyị nwere ike ịchọta ihe nile dị anyị mkpa Chineke. Ihe mbụ anyị na-ahụ bụ na Chineke bụ enyi anyị n'oge nsogbu.
m. Chineke Bụ Enyi n'oge nsogbu
a. Chineke Na-eche
The ụzọ David ekpe ekpere akwuru na ọtụtụ ndị chere na Chineke na-anụ. Ọ na-ewere na ọ nwere a mmekọrịta ya na Chineke nakwa na Chineke na-eche banyere ihe na-aga ndụ ya. Ọ bụ n'ezie mara mma ịrịba ama mgbe ị na-eche banyere ya. The Chineke nke eluigwe na ala na-eche banyere nke a ọzụzụ atụrụ agba ọsọ ndụ. Arụ ụka nwere ike na-eche na Chineke na-elekọta banyere nsogbu ndị anyị na-adịghị mkpa n'ezie ma ọ bụ mee ka ukwuu nke a dị iche. Ònye kwesịrị-adịghị ahụ anya na enyi, mgbe ihe nile nke ndụ gị bụ ọgba aghara? Ma ha ga-enwe nnọọ njọ. Eziokwu ahụ bụ na Chineke bụ enyi, na-emetụ ya n'obi, na-eme ka ndị niile dị iche na ụwa. Ma ma ọ bụ onye na-eche banyere ọnọdụ gị-agbanwe otú ha si meghachi omume mgbe ị na-agwa ha banyere ya.
Ọmụmaatụ, ihe ga-eme ma ọ bụrụ na m cable we pua, na kama ịkpọ m cable ụlọ ọrụ m na-akpọ m Internet na-eweta. Mma m ike ịkpọ ma gwa ha ihe niile m mbipụta na m cable. M nwere ike ichetara ha otú m na a kwesịrị ntụkwasị obi ahịa, na-adọta mmasị on ha otú ekporopụ anya m na nke a arụrụala ọrụ. Ma n'ihi na m na-akpọ nọmba adabaghị, ọ gbasaghị ha. Ha na-agaghị na-agbalị ime ihe ọ bụla banyere ya. N'ezie m mara mma n'aka na ha anaghị eche ọbụna mgbe m na-akpọ nọmba nke ziri ezi, na ọ dịghị mgbe ha ime ihe ọ bụla banyere ya, ma ị ga-esi ihe m na-ekwu. Ọ dị mkpa ma ma ọ bụ onye na-eche banyere.
Ugbu a, m chọrọ ka ị were ihe ọ ga-abụ dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụghị Chineke na-eche banyere anyị na nsogbu. Anyị nwere ike tikuo Chineke ogologo ụbọchị dum, ma ọ ga-enweghị ihe ọ bụ mgbe niile. Jụọ David ọ bụrụ na ọ dị mkpa na Chineke na-eche. Anya azụ na amaokwu otu.
M mkpu ike ka Jehova; M welie olu m nye Jehova maka ebere. M awụkwasị mkpesa n'ihu ya; n'ihu ya, asim m nsogbu.
Nke a bụ otu nwoke na ngwa ngwa ize ndụ. Ndụ ya dị n'ihe ize. Ọ bụ dị ka ọ bụ na-agba ọkụ. Ọ bụ dị ka o a na-achụ achụ site Nelly na-egbe. Na ọ na-agbasi-eti mkpu maka enyemaka. M nwere ike iche David ke abaitiat, ọsụsọ na-agba dị ka ọ na-ekpe ekpere ekpere a.
Na dị ka David na-ekpe ekpere, ọ na-aghọta na Chineke bụ enyi ya na-emetụ ya n'obi. Na na eziokwu mere otú ahụ ka o kpee ekpere.
Ọ maara na Chineke na-ege ntị. Lee anya na amaokwu isii. ọ na-ekwu, "Gee ntị ntiku m n'ihi na m na olileanya dịkwa mkpa." Ugbu a, m na-echeghị na nke a na-enye na-agbalị ka o doo Chineke ka ịgbanwee ya na-ege ntị n'ihi mgbanwe. David kwuru nke a ugboro na Psalms. M na-eche David na-ekwu, "I kwere nkwa ntị ndị gị mgbe anyị na-agwa gị. Ya mere, na-anụ m. M na-ekwu. "Ọ dị ka ọ na ịme ọpịpị ya n'ubu. dị ka, "Onyenwe, ege gị hụrụ n'anya. Ọ dị ihe m ga-ekwu. "
David maara banyere Chineke track ndekọ. Ọ ma na Chineke gbara ndụ na ndị a. Ọ maara Chineke kwere nkwa na-na ha. Ọ maara banyere otú Chineke nụrụ ekpere ha ma nyefee ha ugboro ugboro. Ọ na-atụ anya na nke a na Chineke ga-anụ ya a dị ka nke ọma.
Christian, ka ị na-ekpe ekpere na a na ihe ọmụma? Ma ọ bụ ka i chere na ị na-dị nnọọ si okwu? Ị na-ekpe ekpere a n'echiche nke Chineke chọrọ nlekọta na ịhụnanya maka gị? Bụ ekpere a n'ezie mmekọrịta ya na Chineke ma ọ bụ na-na ị dị nnọọ atụba okwu gbagoo dị n'uko? Ọ bụ naanị a ememe? Ọ dị mkpa na Chineke bụ enyi onye na-eche.
Anyị nwere ike ịmụta ihe site n'ụzọ David ekpe ekpere. David n'ezie airing ya mee mkpesa Chineke. Anyị maara na Akwụkwọ Nsọ Chineke nyere iwu ka anyị ghara grumble na mkpesa. Ma, ebe a David na-egosi anyị ụzọ ziri ezi isi na-ekwusi okwu anyị mkpesa. Ọ dịghị grumble na mkpesa megide Chineke ka ụmụ Israel nọ n'ọzara. Ọ dịghị mkpesa n'ụzọ na-ewepụta uma Chineke ma ọ bụ ikpe n'ime ajụjụ. Ọ dịghị etinye Chineke na-ekpe ikpe.
Ọ na-eme n'ezie na-abụghị. Dị ka anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị na psalm David sie anyị ịdị mma Chineke. Ọ bụ OK ikwupụta gị mkpesa Chineke, ma na-eme ya na obi ike zuru ezu na Ya. Ọ bụ OK na-agwa Chineke ị na-enwe a ike ike oge. Ma mgbe anyị ibo ya ebubo nke ịbụ ezighị ezi - ma n'olu dara ụda ma ọ bụ na obi anyị - nke ahụ bụ mgbe ọ na-aghọ mmehie.
Ma ekpere bụ ike ịghọta mgbe ụfọdụ. One rapper, na a song na-akpọ Ezigbo Chukwu, -ekwu banyere ekpere dị ka nke a.
"Echere m na ọ bụ ọrụ n'aka jide akara biko / Kpọọ m crazy m chere na ma eleghị anya Ọ emetụta agụ."
Ọ na-ewetara elu a mma mgbe. Chineke ma ama ma ihe ị na-eche echiche tupu ị gwa Ya. Ọ bụrụ na Chineke maara ihe niile, ihe bụ isi ihe na-agwa ya? Ọ bụ naanị ọ na-ịdọ aka ná ntị? Ọ ewute m mgbe Kraịst na-ekwu banyere ekpere dị ka ma ọ bụrụ na isi ihe mgbaru ọsọ na-kwado uche gị na Chineke. Nke ahụ bụ na-abụghị eziokwu.
Anyị na-agwa ya n'ihi na ọ na-anụ olu anyị, -Atọ ya ụtọ ịnụ olu anyị, na-emetụ ya n'obi na Ọ na-emegharị na ịhụnanya (ọzọ on na mgbe e mesịrị). Ma, biko, gwa Chineke gị nsogbu. Etiku ya. N'ihi na site na mkpesa gị. Welie olu gị. Na-amụta site David ebe a.
O na-eme na-aga. Lee anya na ihe ọ na-ekwu n'amaokwu atọ.
Mgbe mmụọ m na-etolite nāda # mbà n'ime m, ọ bụ gị mara ụzọ m. Ihe n'okporo ụzọ ebe m na-eje ije ikom zoro na ọnyà m.
N'ebe nile David anya, Saul zoro ọnyà ya. Ugboro abụọ ọ nwaa igbu ya mgbe ọ na-egwuri ụbọ akwara ya. Ọ tụbara a ube-ya ma gbalịa magide ya na mgbidi. Sọl wee kpọnye ya nwa-ya nwayi purposely, dị ka ọnyà ya. Ọ gbalịrị ime ka o doo nwa-ya, Devid BFF, igbu ya. Na now Sọl na ndị agha ya na-achụ ya. E nwere ihe ize ndụ na ọ bụla n'aka.
Amaara m na ụfọdụ n'ime anyị na-eche dị anyị yiri David ebe a. Anyị na-eche dị n'agbanyeghị ebe anyị na-atụgharị e nwere nsogbu. Anyị na-eche dị anyị dum ndụ na-a ọgbaghara. Na ihe mere anyị na-na na na nkpà. Nke a bụ otú David chee.
Ma ọ na-ekwu na mgbe mmụọ ya nāda # mbà, mgbe ya na mmụọ dakwara mbà, mgbe ọ bụ ọnụ, ọ bụ Chineke bụ onye maara ụzọ ya. Ọ bụ Chineke bụ onye maara ihe Ọ na-aga site na.
N'amaokwu anọ ọ na-agwakwa Chineke banyere ihe na-aga.
Lee ka nri m na-ahụ; ọ dịghị onye na-enwe nchegbu maka m. M na ọ dịghị ebe mgbaba;ọ dịghị onye na-eche banyere ndụ m.
d. No One Ma Chineke
David na-ekewapụ n'ebe nwunye ya na iche na ya na ezigbo enyi, Jonathan. Ọ bụ unwelcome n'ala-eze. Ọ na-ele ka ọ dịghị onye na-eche banyere Ya, dị ka ọnweghị onye nwere ike ịzọpụta ya. Ma ọ na-ebutere Chineke. David maara Chineke bụ enyi ya nakwa na Chineke ga-elekọta ya.
Lee ka nke ahụ na-eme ka mgbe enyi agbakụtawo on ị. Na ezinụlọ ezere gị. Na ngalaba-ọrụ anaghị eche banyere gị. Na ndị agbata obi gị adịghị ọbụna mara onye ị bụ. Chineke maara gị na Chineke na-eche banyere gị. Chineke na-anụ ekpere gị. Chineke maara otú ọtụtụ ntutu dị n'isi-gi. Ọ maara ihe bụ nsogbu na ntughari juputara na ị na-enwe. Na n'echiche a, ndị kwere ekwe n'ime Jizọs bụ mgbe naanị.
Ọtụtụ mgbe, anyị na-eji ndụ anyị na-agbalị nke na anya ndị ọzọ, chọrọ ha ntị ma na-akwanyere. Anyị chọrọ ka ha na-eche banyere anyị. Chineke na-eche! E nweghị n'àgwàetiti dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ gbahapụ ụlọ ebe ndị kwere ekwe na-ekewapụ. Chineke nọnyeere unu. Na Ọ hụrụ gị n'anya. Na-emetụ ya n'obi.
n'eziokwu, -enweghị Chineke dị ka enyi gị ị ga-agbahapụ. Ọ ga-mwute ma ọ bụrụ na a Psalm biri ebe a. Na ọtụtụ nke ụwa na-akwa arịrị na-akwụsị n'ebe ahụ. Ma David maara na ọbụna mgbe ọ na-eche ihe ndị kasị naanị na gbahapụrụ, Chineke na-eche. Na Ọ maara na mgbe O kwesịrị onye na-elekọta ya, ọ ga-agba ọsọ Chineke.
Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ihe nile anyị mkpa Chineke, ọbụna mgbe o ike ike. Ma n'ezie Chineke dị ka Enyi anyị abụghị ihe niile anyị chọrọ.
Achọrọ m ime ka gị n'ebe otu ihe ọ na-ekwu na amaokwu anọ. ọ na-ekwu, "Enweghị m ebe mgbaba." Ma mgbe anyị na-anụ okwu mgbaba, anyị na-akpaghị aka na-aga a metaphorical uche. Anyị na-eche na ọ pụtara na o nwere na ọ dịghị onye na-agba ọsọ na-. Nke ahụ abụghị ihe ọ pụtara n'ebe a. Ọ pụtara na enweghị m ebe obibi. M enweghị ebe obibi. M nwere inyeneke ebiet eke na-ehi ụra. M n'ụzọ nkịtị ahụ kpughere. Ọ bụghị ndị nwere nhọrọ nke achọpụta na a Ụlọ Ndina 6. Nke bụ ya mere ọ na-ezo si n'ime ọgba.
Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ihe nile anyị mkpa Chineke? Nwere ike na Chineke anyị ụlọ? Lee anya na amaokwu ise.
M na-etiku gị, O nwe-ayi; m na-ekwu, "Ị bụ ebe mgbaba m,òkè m n'ala ndị dị ndụ. "
Mbụ ọ na-ekwu, Enweghị m enyi, ma ị enyi m. M na-adịghị onye ọ bụla na-ege ntị, ma ị ga ige m ntị. M na-adịghị onye na-elekọta, ma ị ga-elekọta m. Ugbu a, ọ si, Enweghị m ihe ọ bụla ndo, ma na ị na m ndo. Ị m ebe mgbaba.
Ka m nọ na-arụ ọrụ na ozizi a, m n'ezie ebupụtara na n'amaokwu a. M chọrọ ka ọ dịrị ndị ọzọ anyị karịa a mara mma kọfị cup amaokwu. Gịnị ka nke a pụtara n'eziokwu na ndụ n'ezie?
Anyị hụrụ nke a ebe mgbaba asụsụ urua ke Psalm 141 oke. Na anyị na-ahụ ya niile ná Scriptures. Ọ na-ekwu na Chineke bụ nkịtị ya nkịtị ndo. Ma ọ na-ekwu n'etiti ya dịkwaghị ndo, Chineke bụ ụdị ọzọ nke ndo ya. Chineke bụ ebe mgbaba ya.
Gịnị ka ọ pụtara n'ihi na Chineke-gi na ebe mgbaba? M na-eche na ọ pụtara Ọ bụ gị nchebe si ka ihe ize ị na-abụghị ụwa. Ọ bụ ezie na anyị meela ka anyị n'ebe obibi anyị bụ anyị obere eluigwe na ụwa na ntụsara ahụ na entertainments nke ụdị, nchebe bụ nnoo nzube nke ndo. Ọ bụ ya echebe anyị pụọ n'ihe mmerụ - si weather, si ohi, si kpara.
Gee ntị n'ihe David na-ekwu na ihe ọzọ Psalm o dere mgbe ọ nọ n'ime ọgba.
-Agbaghara m, O Chineke, -agbaghara m, n'ihi na mkpụrụ obi m na-ewe ebe mgbaba; na ndò nku gị ka m ga-agbaba,rue oké ifufe nke mbibi ngafe site. (Psalm 57:1)
David na-asị enye eyedịp na Chineke. Chineke bụ nchebe ya nbibi. Enyere, Ọ na a gwa Chineke mkpụrụ obi ya na-ewe ebe mgbaba. Na n'ala ala nke onye ọ bụ, ya isi, ọ na-achọpụta ebe mgbaba ya na Chineke.
bụ Chineke gị mgbaba taa? Gịnị ka ị na-atụkwasị maka nchebe? Gịnị ka a na ndụ gị, na ọ bụrụ na ị kwụsịrị ya obi ga-adị kpughere na-emeghe ka mbibi? Ọ bụ gị ego gị? Ọ bụ gị ọkwa? I, Olee ebe i na-agba ọsọ n'oge nsogbu? Olee ebe ị na-eche mma? Ọ bụ na mmekọrịta ma ọ bụ na ọrụ? Ọ bụrụ otú ahụ, mgbe ahụ, ọ dịghị ada ka Chineke bụ ebe mgbaba gị.
Eme Chineke ebe mgbaba gị bụ a postcho nke obi. Ọ bụ a miri emi tụkwasịrị Chineke obi dị ka anyị nchedo. Ọ na-ebe ọ maara na ya na Chineke anyị dị mma. David maara ndụ ya bụ ihe ize ndụ, na ọ bụ obi erughị, ma ọ na-enwe mma. Ihe a iju ebe na-, ma nke a bụ ebe ọ bụla kwere ekwe a dara n'ụwa ga-ahụ onwe ha. na nkpà, ma udo. wuta, ma mgbe nile na-aṅụrị ọṅụ.
Ugbu a m si, na n'ihi na Chineke ga-echebe anyị, Ọ gaghị ekwe ka a kụrụ na ihe ọ bụla ọnwụnwa? Ọbụghị ncha ncha. Chee echiche banyere ya dị ka nke a.
Elekere a m na-yi taa bụ waterproof. Ugbu a, nke ahụ apụtaghị na ọ bụrụ na m na-eje ije n'èzí na na mmiri ma ọ bụ na-ahapụ ya na mgbe m na-asacha efere, ọ ga-mgbochi mmiri. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụgodị na-eche nche na-eme mgbochi mmiri, ọ gaghị ebibi. Nke a bụ yiri ihe onye kwere ekwe. Chineke adịghị kwere nkwa ka anyị ghara ịbụ na a oké ifufe, ma Ọ na-kwere nkwa na anyị ga-ghara ibibi. Anyị nwere ike ina kụrụ oké ifufe, ma anyị nwere ike ghara ibibi.
Kedu ihe nke ahụ pụtara? Ndị Rom 8 -ewepụta ọtụtụ jogburu onwe ihe anyị nwere ike iche na-eme ka anyị, gụnyere ọnwụ. Na ọ na-ekwu ọbụna n'etiti ihe a niile, anyị na-na ihe karịrị ndị meriri site na Kraist nke hụrụ anyị n'anya. Ndị Rom 8 na-agwa anyị na ihe niile ga-esi ike maka ọdịmma nke ndị hụrụ Chineke n'anya na-akpọ dị ka nzube Ya.
Ya mere, leruo, dị ka anyị nchedo, Chineke anyị ga-egbochi anyị ihe niile ga-esi na ọgwụgwụ anyị nsogbu ma ọ bụ mbibi. Na na kwesịrị ịkasi anyị obi. N'ihi na anyị maara ma ọ bụrụ na Ọ na-ahapụ ya kụrụ anyị, ọ bụ maka ọdịmma anyị na n'ihi ebube-. Ọ ga-echebe anyị. Ya mere, Devid ka, "Ònye kwesịrị anụ ahụ ndo, mgbe m nwere Chineke!"Chineke bụ ihe kasị akpa anyị, na mgbe ihe dị mkpa na-zutere, na ndị ọzọ niile anya dị nta.
Ya ọzọ m na-arịọ ebe i na-agba ọsọ ke nsogbu ụfọdụ? M na-arịọ ma ndị Kraịst ebe a taa ma na-abụghị Christian. Olee ebe ị na-agba ọsọ? Ọtụtụ n'ime anyị na e-agba agba ihe ọjọọ. Anyị na-agba agba ụgha echebe. Na-eme ihe n'eziokwu, nke ahụ bụ nzuzu. N'agbanyeghị ihe na ụgha ndo bụ, ma ọ bụ a onye ma ọ bụ ihe riri - na ọ bụ dị ize ndụ. Ụgha echebe edina anyị. O yiri ka ha mma, ma n'ikpeazụ ha naanị ahapụ anyị ọzọ n'anwụ. Ha agaghị echebe anyị pụọ mbibi.
na Deuteronomy, Moses kwuru banyere otú Chineke ga-azaghachi Ya ndị mmadụ ikpere arụsị.
Ọ ga-asịkwa, “Olee ebe chi ha [ekwu okwu nke arusi nile ha], oké nkume nke ha gbabara… Ka ha bilie ma nyere gị aka; ka ha buru kwa gị nchebe.” (Deuteronomy 32:37)
Ndị Chineke e wakpoo ndị mba ndị ọzọ, na ife chi ha na-etinye ha olileanya na - ụgha ha dị echebe - enweghị ike ya echebe ha. Adịghị eme ka ha mere n'amaghị ama.
Ọzọkwa, anaghị eme ka nsogbu bụ iche na ị nwere ike dị nnọọ ka Chineke gị ebe mgbaba mgbe ọ bụ oge. Ị ga-dị nnọọ echere ruo mgbe ọ na-akawanye njọ ma ị ga-ezochi na Chineke. Na eme ka mba uche mgbe nile. Ị na-adịghị echere ruo mgbe oké ifufe na-abịa iwuru. Ị na-ebi n'ụlọ ahụ, na ị na-echebe mgbe ọ na-amalite mmiri. Ị na-adịghị masịrị mgbe ọ na-amalite drizzling, n'ihi na ị na-ama na-ezo onwe gị na Ya. Na-amalite na-atụgharị n'aka mmehie na-atụkwasị ya obi, na ị ga-na-echebe site Ya ezi omume iwe. Ma gaa n'ihu site na-agba ọsọ azụ Ya n'ụbọchị ruo n'ụbọchị ruo n'ụbọchị.
Ma ka anyị na-ekwu banyere nchebe Chineke, anyị na-apụghị ichefu na a di na nwunye ụbọchị ago ihe jọgburu onwe ya mere na Newtown, Connecticut. Ọzọ otu n'ime ndị a uka ọgụ na a akwụkwọ. Ọ dị obere ụmụaka ise na isii na afọ nọ n'agbata. Nke ahụ kwesịrị iwe anyị na-eru uju anyị. Na ọdachi dị ka nke a mee ka ndị mmadụ ịjụ ajụjụ.
Christian, gịnị ka ị ga-agwa enyi gị na-arụ ọrụ na-ekwu, "Olee ebe Chineke gị n'etiti ndị a? Gịnị mere na o chebe ndị aka ha dị ọcha na na? Gịnị kpatara O ikwe ka o mee?"Gịnị ka ị asị na?
Gịnị ka m ga-ekwu? Echere m na m na-asị ya, Amaghị m. Gịnị mere m kama? Amaghị m. Achọghị m ka m na-enye ụfọdụ nkà ihe ọmụma azịza banyere nsogbu nke ihe ọjọọ. Ọ dịghị onye chọrọ ịnụ na. Echere m na m ga-ajụ, m amaghị ihe mere, ma m maara na Chineke. Na Ọ dị mma. Chineke adịghị gwara anyị niile nkọwa ndị doro banyere ihe mere Ọ na-ekwe ihe ụfọdụ, ma ọ gwawo anyị ihe ya ka. Anyị maara Ọ dị mma, na ndị maara ihe, na nke zuru okè. O meelarị pụtara na. Ya mere, ihe niile m nwere ike ime bụ obi Ya, ekpe ekpere maka ndị idei mmiri metụtara, na-echeta na ọ dịghị ọnọdụ otú jọgburu na anyị agaghị na-agba ọsọ Chineke.
N'ihi na ọbụna ihe ndị kasị obi wrenching nke ọnọdụ, anyị nwere ike ịchọta ihe nile dị anyị mkpa Chineke. Ọ bụ enyi anyị na anyị n'echebe, ma na e nwere ihe.
III. Chineke bụ Treasure na Times nke Nsogbu
M na-etiku gị, O nwe-ayi;m na-ekwu, "Ị bụ ebe mgbaba m,òkè m n'ala ndị dị ndụ. "
Devid kpọrọ Chineke òkè ya. Okwu a òkè pụtara a òkè. Ya mere, nke a pụrụ izo aka gị òkè nke ihe nketa - òkè gị nke ihe na-hapụrụ. O nwere ike ịpụta otu ụgwọ ọrụ ahụ bụ ihe kwesịrị ekwesị gị. Ya mere, na ya ugbu a ọnọdụ, David nwere ihe ọ bụla. Ọ bụ n'ebe obibi ya agakwaghị na eze mma graces.
Ya mere, ọ na-ekwu, "Enweghị m òkè, ihe nketa, a ụgwọ ọrụ. Chineke, na ị na-ụgwọ ọrụ m. Ị m akụ. Ị bụ ihe m niile!"Chineke bụ Ya ihe nile.
My na nwunye m na-ekiri vidio a na ESPN n'izu a na-akpọ mebiri. The akwụkwọ bụ banyere-eme egwuregwu bụ ndị na otu mgbe ndị millionaires, ma hụrụ onwe ha nnọọ mebiri. Ụfọdụ n'ime ndị a okorobịa n'ụzọ nkịtị mere ka ọtụtụ narị nde, ma fụọ ya niile on ụlọ, ụgbọala, uwe, na ihe dị oké ọnụ si ebi ndụ. Ka ha biri dị ka ma ọ bụrụ na ihe, onwunwe, ihe ndị ha akụ. Na mgbe ha na-efu nile nke ọ, ha amaghị ihe na-eme. Òkè ha ejewo.
Mgbe ahụ e nwere ihe a Ihọd dị ka Pọl Onyeozi. Onye na Filipaị na-ekwu, ọ na-mụtara inwe afọ ojuju, ma ọ bụ ọgaranya ma ọ bụ na ọ bụ ogbenye. Ime na ị chọrọ ịmata ihe nzuzo? Ọ maara na ihe niile o mkpa n'ezie bụ Kraịst. All ọ chọrọ bụ Kraịst. Ọ dị njikere atụfu ihe niile ka ọ gbaa nwere Christ. Chineke bụ akụ ya. Ị na ị chọrọ inwe mgbe ahụ?
dị ka A.W. Tozer etinye ya n'akwụkwọ ya bụ The arụ Chineke, "Onye nwere Chineke maka akụ ya nwere ihe niile na One."
b. Joy na-adabereghị Money
Na ìhè nke a, ọṅụ anyị nwere ike ịbụ dabeere n'anyị akụ akụkọ. Anyị ọṅụ na udo nwere ike ghara ịga na ala na otú nwee ego anyị na-eche, nke bụ a ọnwụnwa mgbe ụfọdụ. Anyị kwesịrị ụdị nkume siri ike ịtụkwasị Chineke obi, na-arụ ọrụ ike iji nye, ma na tụkwasịkwara Chineke karịrị ego. Ị pụrụ ịtụkwasị obi na ego, ma ọ bụ a ọjọọ echiche. E nweghị ego ole a na-apụghị fụọ ma ọ bụ zuru. Ego agaghị adịte, Ma Chineke ga-. Ọ ga-eji akụ anyị, ọbụna n'oge nsogbu.
Olee otú ị pụrụ arụ ọrụ gị n'ụzọ na-prioritizes Chineke n'elu ego? Eme na ọchịchọ gị na-achụ ego, eme ka gị na ịchụso Chineke anya ngwụrọ na lackluster? Ọ bụrụ otú ahụ, Chineke nwere ike ghara ịbụ n'ezie akụ gị. Nwere ike ị gaghị ahụ ya dị ka gị ezi ụgwọ ọrụ.
Ugbu a na-ekwu na Chineke bụ ihe niile anyị mkpa n'ezie na-agaghị ekwu ihe niile anyị na ndị ọzọ na-egbo mkpa akwụsị. Ma nke a abụghị a oku na-aga na-amalite na-eleghara niile nke gị mkpa ndị ọzọ. Ma, ọ bụ oku na-adabere ọzọ na gị mkpa kasị ukwuu.
c. The n'ala ndị dị ndụ
Ị chọpụtara na David na-ekwu, Chineke bụ òkè ya n'ala nke ndị dị ndụ. Ọ na a gwa Chineke bụ ihe niile m nwere na ihe niile m mkpa ugbu a na ndụ a. Ya mere, ọ na-ekwu na Chineke bụ naanị akụ ya n'ụwa ya ọzọ. Ọ na a gwa ugbu, Chineke bụ ihe niile m kwesịrị.
M maara na e nwere ụfọdụ n'ime anyị ebe a taa na-adịghị enwe ihe niile anyị chọrọ, ma eleghị anya, ọ bụghị ihe niile anyị mkpa. Ma ọ bụrụ na i nwere Chineke, -ume. Ma na-eto Chineke na gị mkpa kasị ukwuu esesịn a okosobode ke Christ.
Ọbụna mgbe anyị na-eche dị anyị na-kọrọ, anyị nwere ike ịchọta ihe nile dị anyị mkpa Christ.
IV. Chineke Bụ Onye Nnapụta na Times nke Nsogbu
Dike na fim bụ a nnukwu ihe ugbu a. Ụbọchị ọ bụla i lee e nwere ihe a ọhụrụ dike nkiri. Batman, Superman, Spiderman, Monkeyman ... dị nnọọ ịhụ ma ọ bụrụ na ị ka nọ na-aṅa ntị. Mgbe ahụ i nwere ọzọ di iche iche ihe na fim dị ka e na James Bond. Anyị na-amasị ndị a iche iche na fim, n'ihi na anyị na-mmasị site na ibu karịa ndụ dike onye nwere ike ịzọpụta ụbọchị ahụ mgbe nile anya na-enweghị enyemaka. Ọfọn David na-enye nkọwa a yiri picture ebe a nke Chineke. Lee anya na amaokwu isii.
Ege m ákwá,n'ihi na anọ m olileanya dịkwa mkpa;-anapụta m n'aka ndị na-agbaso m, n'ihi na ha akaria m.
b. sikwara ike njite Mkpa
David ọzọ na-agwa Chineke otú obi dị ya. Ọ bụ na olileanya dịkwa mkpa. David bụ na njedebe nke onwe ya. E nweghị ihe ọ na ya ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ nwere ike ime iji zọpụta ya. Ọ bụ na nsogbu. Ma ọ bụ na a nsogbu na ọ na-eje Chineke. Ọzọkwa David maara banyere Chineke. Ọ maara na Chineke na-agaghị ekwe omume. Ọ na-ama hụrụ Chineke na-eme ka-agaghị ekwe omume na ndụ ya na ụfọdụ n'ime agha na ọ ga agha. Ọ bụrụ na Chineke nwere ike inye anụ ọhịa bea, na Refaim, na ụsụụ ndị agha n'aka-ya, mgbe ahụ n'ezie ọ pụrụ ịnapụta ya site n'otu onwe-ekwe eze.
ma lee anya, ị na-adịghị na-arịọ maka ihe ma ọ bụrụ na ị na-amaghị na ị na mkpa. Nwa m tikuo nri, n'ihi na ọ na-eche na agụụ na maara ya mkpa nri. David na-eche na olileanya dịkwa mkpa na ọ na-eduga ya itiku Chineke. Ọ maara na ndị na-agbaso ya dị ya ike nke ukwuu. Ọ ma na ọ bụ naanị Chineke nwere ike mee ya free na nke a karịsịa ọnọdụ.
Na ị na-achọpụta otú David jụrụ. David dịghị agwa dị ka ma ọ bụrụ na ọ na-eru inweta na a aka. N'amaokwu onye ọ na-ekwu ọ na-arịọ maka "ebere." Ọ na-arịọ na ọ ga-enweta ihe o tosiri, ma kama ihe ọ kwesịghị ịma: nnapụta. Na ihe nile nke ekpere anyị ga-abụ otu. Ji obi umeala na-amata na ị na-ike na-adịghị. -Ekwesịghịrị anyị ihe ọ bụla. Ma anyị na-arịọ Chineke ka obi ebere-anapụta anyị.
Ọtụtụ mgbe, m ajụ onwe m otú m nwere ike inyere enyi bụ na ọnọdụ dị ka nke a. O doro anya na, Achọghị m ka m na-dị nnọọ ikwu "Chineke bụ ezu" na eleda ọnọdụ ha. Naanị ihe m maara ime bụ inyere ha ga-esi na ebe ọ bụ na Devid. Dị ka a na chọọchị nke a n'ụzọ anyị nwere ike ije ozi ọ bụla ọzọ n'oge oké mkpa. Enyere ha ga-esi na ọgwụgwụ nke onwe ha mgbe ha na-aghọta mkpa ọ dị ha na obi Ya ọzọ. Ekpe ekpere maka ha, hụrụ ha n'anya. Ọtụtụ mgbe nke ahụ bụ ihe niile anyị nwere ike ime.
c. Nyere iwu-arịọ maka enyemaka
Ọ ga-abụ iberiibe ma David na-atụle na-agba agba onye ọ bụla ọzọ, mgbe ọnọdụ a bụ n'ụzọ doro anya si ya, na ndị ọzọ na-achịkwa. Otu bụ eziokwu nke anyị, ma anyị na-agba ọsọ n'ebe ndị ọzọ mgbe ụfọdụ. Ma kpọrọ anyị ka anyị bịakwute ya.
…akpọku m n'ụbọchị nke nsogbu; M ga-anapụta gị, na ị ga-asọpụrụ m. (Psalm 50:15)
Chineke ikpughe ya n'elu na n'elu ọzọ Akwụkwọ Nsọ dị ka onye mgbapụta. Olee banyere ihe Chineke mere n'Oké Osimiri Uhie? Gịnị banyere ná ndụ nke Joseph? Gịnị banyere ọtụtụ agha? Mgbe niile anya agaghị ekwe omume, Chineke ka nwere ike ịnapụta. Ọ dịghị onye iro ndị nwere ike legitimately-eguzo megide Ya. Agha-ada n'elu, ugwu isiala, na ifufe na ebili mmiri kwụsị na n'iru Ya. Ya track ndekọ na-atọgbu. Ọ gara ọbụna mgbalị dị ukwuu iji napụta anyị ná mmehie.
The ekpere na abụ ọma a, ya ahụhụ na mkpa, -echetara m ekpere ọzọ na Bible. N'ezie, onye-ekpe ekpere bụ a ukwuu mgbe e mesịrị ikwu nke nwoke nke bụ onye dere, a Psalm. Ọ na-echetara m ekpere ahụ Jizọs kpere n'ime Ogige Ubi nke Gethsemane. Jizọs maara Ọ na-aga na cross. O wee rịọ ha na Chineke, na ihu ọma na-ajụ ya ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọzọ ọ. Ọ chọrọ ka e wee napụta ihe mgbu a na-aga ya n'ihu. Ya nhụjuanya bụ otú miri emi na sweated ọbara.
Chineke-anapụtaghị Jesus pụọ n'ihe mgbu na-apụghị ichetụ n'echiche na-ata ahụhụ na-aga ya n'ihu. Na Jesus anwaghị ụzọ mgbapụ. Ọ maara na nke a bụ ihe ọ bịara ime. Jizọs nwụrụ n'obe. Na mgbe Jesus eyịride na cross, Ọ na-ata ahụhụ nke mere na mụ na gị ghara. Ọ nọ na ntaramahuhu maka nmehie nile nke ọ na-emeghị. Ọ biri ndụ zuru okè, Ọ na-wutere Chineke. Ọ bụghị dị ka Devid, ma ọ bụ gị, ma ọ bụ m. Anyị na-mmehie, ndị na-na na-ewute nsọ Chineke. Ọ bụghị onye mmehie, ma Ọ nwụrụ na onye mmehie ọnwụ on na cross. E nyere ya n'elu ọnwụ, nke mere na anyị nwere ike na-anapụta.
Ọ na a na-akpọ anyị, ọ bụghị iji napụta onwe anyị, ma Žt ndị dike bụ ndị bịara ime ka anyị. Anyị na-enweghị iji merie a agha, Naanị ihe anyị na jidesienụ Onye ugbua nwere. Kweere na Ya. obi Ya. -Enye gị ndụ Ya.
Nke bụ eziokwu bụ, ọ bụrụ na ị n'ezie tụkwasịrị Kraịst, Chineke abụghị enyi gị n'oge nsogbu. Ọ kwere nkwa nchedo. Ọ kwere nkwa na-akụ gị ma ọ bụ gị mgbapụta. Ndị Kraịst na-aga site na oge nsogbu, ma anyị akụkọ agwụ na nnapụta. -eme gị?
e. Ihe kpatara nke Nnapụta
Mee ka m nwere onwe m mkpọrọ,ka m wee na-eto aha gị. Mgbe ahụ ka onye ezi omume ga-akpọkọta banyere m n'ihi ịdị mma gị m.
N'ebe a, o na-eme ka o doo anya ihe mere na ọ chọrọ ka a napụta, ya mere na ọ chọrọ ka ndị - n'ihi na ọ chọrọ na-eto Chineke dị ka Onye Nnapụta ya. Ọ na-ahụ nke a dị ka ihe ọzọ ohere maka Chineke na-egosi onwe Ya anya.
Christian, olee otú i si emeghachi omume mgbe Chineke napụtara unu? M nwere ike iche maka ọtụtụ, ọtụtụ oge ndị m na-ata ahụhụ ma rịọ maka ebere Chineke. Adị m ka m na ọ bụ n'ụzọ nkịtị na njedebe nke ụwa. Na Chineke zara ekpere m. Na dị m nnọọ ụtọ. M kpam kpam chefuru Chineke. M na-eto Ya. M na-asọpụrụ Ya. Echefuru m banyere Ya. Na ọbụna chefuru ihe O mere, nke yiri uche na-adịghị.
Mgbe m bụ obere nwa ewu, ihe pụtara ìhè m afọ bụ Christmas. Na m ụbọchị ọmụmụ bụ gburugburu a oke n'ihi ya, ọ amara pụrụ iche. N'ebe a na ndụ gị enweghị ọtụtụ. Ị nwetara cheerios, ị nwetara naptime, na ị nwetara Christmas. M hụrụ nnukwu wheel mkpọsa ngwá ahịa na TV na m ka, "Enwere m nwere ya." M nwetara a big wheel. Na m na-eche na m eleghị anya mmiri nke ọṅụ gbara.
Ugbu a ọ gaghị iju ọ bụrụ na m jụrụ maka na n'ihi na ọnwa na ọnwa, ma mgbe m laghachiri n'ụlọ akwụkwọ ma na ndị mmadụ jụrụ m ihe m nwetara, Echefuru m banyere ya? Olee iju bụ ya, na anyị nwere ike rio Chineke ka meere anyị ebere, ma ụbọchị gasịrị echefu ka ọ bụrụ na ọ dịghị mgbe mere?
Anyị kwesịrị ime ihe ọ bụla ọ na-ewe iji cheta ebere Chineke na-azụlite obi, ma ọ bụ journaling ma ọ bụ na-ekpe ekpere na ndị ọzọ. Mee ihe ọ bụla ọ na-ewe.
Ná ngwụsị nke Psalm, David na-ekwu, ndị ezi omume na-akpọkọta banyere Ya. Ọ pụtara dị ka ọ na-etokwa Chineke maka ịdị mma, ndị ọzọ kwere ekwe ga-eso Ya. Nke a bụ ihe anyị na-eme on Sunday ehihie na abalị, anyị na-eso ndị a àmà nke amara. Anyị na-anụ nke ịdị mma Chineke na anyị akpọkọta gburugburu ibe na-eto Ya ọnụ. Ihe a Nnapụta Ukwu.
O nweghị nsogbu nke mere jọgburu onwe ya na Chineke bụ keenweghi ike nke na-anapụta gị. Mgbe ọ dịghị onye nwere ike ịnapụta gị, Chineke bụ gị mgbapụta. -Agba ọsọ Ya.
M na-echeta dị ka nwa ewu, eche na ndị mụrụ m nwere ike dozie ihe nile. N'ezie, ọ dịghị mkpa bụ ihe merenụ, Mama m na papa m nwere ike idozi ya. M gaara agụụ ịga na ndị agbata obi ụlọ, ma ọ bụ na-akpọ otu onye ikwu. M nnọọ gara mama m na papa, n'ihi na ha nwetara m. Amaghị m otú, ma m maara na ha nwere m.
Anyị kwesịrị ụdị childlike okwukwe. The ụdị okwukwe na-eburu, n'agbanyeghị ihe ndị nsogbu, M nwere ike ịga Chineke maka ihe dị m mkpa. Ka anyị ikpe ekpere.
Kathy • April 16, 2016 na 6:28 Abụ • zaghachi
ọma we! ekele, nwanne,
ụzọ • January 23, 2018 na 9:25 Abụ • zaghachi
Ka Chineke gọzie gị ka m na-amaghị na ị na. Ma m hụrụ nke a izi ihe bụ nnọọ n'oge m na m na m oge nsogbu Chineke na-ekwu m site na nke a isiokwu, Ọ buru m ana m akwa akwa mgbe m na-agụ ya bụ ihe ịtụnanya unu mara na ọrụ gị aka a na ị na-adịghị ọbụna know.Thank ị